KANADA: Nin soomaali ah oo falal ammaan darri ah maxkamad loo soo taagayo | Somaliska
Dalka Kanada ayaa wararka ka imanaya waxaa ay sheegay in nin soomaaliyeed oo lugu Cabdulaahi Xasan Shariif uu weeraro uu adeegsaday baabuur iyo mindi ku dhaawacay shan ruux oo oo midkood la sheegay inuu ahaa askari.
Sarkaal sare oo ka tirsan Mareykanka ayaa sheegay in Shariif ka soo baxsaday dalkaasi Mareykanka, ka dib markii loo diiday sharci ku sheega Mareykanka. Waxaa kale oo uu sheegay sarkaalku in uu ka soo baxsaday Mareykanka xilli la doonayey in dib loogu celiyo Soomaaliya. Ninkan soomaaliga ayaa saraakiisha Marekanku ku eedeyeen in uu kooxaha argagaxisadda la leeyahay xirriir.
Dhinaca kale maxkamad ku taala magaaladda Edmonton ee dalka Kanaya ayaa waxaa ay maxkamad soo taageesay ninkan soomaaliga ah oo ay ku edeeysay inuu galay dembiyo ah isku day dil iyo dhac, waxaana lugu wadaa in toddobaadka dambe maxkamad la soo taago.
Ururo dalbaday in la baaro cunsuriyada ka dhanka ah Soomaalida
Ramadaan wanaagsan dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo muslimiiintaba